Wakaaladaha naqshadeynta ee ugu sumcadda badan Spain | Hal-abuurka Online
Wakaaladaha naqshadeynta ee ugu sumcadda badan Spain
Markaad u baahan tahay wakaaladaha naqshadaynta, waxa aad rabto waa inaad awood u yeelatid inaad ku xisaabtanto kuwa ugu fiican si aad u hubiso inay qabanayaan shaqo fiican. Sidaa darteed, marka aad raadinayso qof aad la shaqeyso, ama xitaa shaqo raadineyso haddii aad tahay naqshadeeye, hadafkaagu waa kan ugu fiican 10-ka sare ee dalka.
Laakiin, Waa kuwee hay'adaha naqshadeynta ee ugu wanaagsan uguna sumcadda badan Spain? Ma garanaysaa midkood? Hadafkaagu ma yahay inaad halkaas ka shaqeyso mise inaad la shaqeyso? Waan naqaannaa iyaga in yar.
3 ROIncrease, mid ka mid ah wakaaladaha naqshadeynta shabakada ee ugu sumcadda badan
5 yogurt Strawberry
7 arrin cawlan
9 bahal madow
11 Ninja ee indhahaaga
Waxaan dhihi karnaa in Neoattack ay hadda tahay mid ka mid ah wakaaladaha naqshadeynta ugu fiican Spain, waa mid caan ah oo sumcadeeda taageerta.
Fue Waxa abuuray Jesús Madurga sannadkii 2014 oo hadda uu leeyahay in ka badan 60 shaqaale ah wuuna sii korayaa. Intaa waxaa dheer, waxay muujineysaa xaqiiqda ah in aysan ahayn Spain oo keliya, laakiin sidoo kale waxay xafiis ku leedahay Colombia iyo Mexico.
Midka Spain waa Madrid. Si kastaba ha ahaatee, looma go'aamin oo keliya oo si gaar ah loogu talagalay naqshadeynta garaafyada, laakiin sidoo kale waxay ku sameysaa suuq-geynta, taas oo ah, waxay bixisaa adeegyo meeleyn, xayeysiis, suuq-geyn iyo, dabcan, naqshadeynta shabakadda (gudahan, dukaamada online-ka ah iyo funnels iibka).
Mid kale oo ka mid ah wakaaladaha naqshadeynta ee sumcadda leh ee Spain waa Appyweb. Laakiin, sidii horeba u dhacday. Waxay isu xayeysiiyaan sidii wakaalad suuqgeyneed oo online ah, iyagoo bixinaya adeegyo meelayn, beddelaad, iwm.
Iyo naqshadaynta garaafyada? Sidoo kale. Gaar ahaan, waxay bixiyaan shaqada naqshadeynta sawirka shirkadda, tifaftirka, ololaha xayaysiinta, naqshadeynta shabakada iyo UX / UI (khibrad adeegsi ama naqshad casri ah).
Waxa uu leeyahay in ka badan 10 sano oo waayo-aragnimo ah isaga ka dambeeya waana mid ka mid ah kuwa ugu caansan Spain.
ROIncrease, mid ka mid ah wakaaladaha naqshadeynta shabakada ee ugu sumcadda badan
Aynu raacno tusaale kale oo ah wakaaladaha naqshadaynta. Xaaladdan oo kale, oo ku taal Madrid oo aan ahayn oo keliya naqshadeynta garaafka iyo adeegyada naqshadeynta webka, laakiin sidoo kale sida wakaaladda SEO, warbaahinta bulshada, xayeysiiska, suuqgeynta gudaha ...
El Kooxda shirkadu waxa lagu tababaray suuqgeynta dhijitaalka ah oo leh hab gaar ah, «MRI» oo u adeegta si loo helo soo celinta ugu badan ee ololaha (sidaa darteed magaca wakaaladu wuxuu la xiriiraa ROI-kaas, taas oo ah, soo celinta maalgashiga).
Xaaladdan oo kale, habka loo shaqeeyo naqshadeynta garaafyada ayaa ah mid dhaqameed iyo heersare ah marka loo eego kuwa casriga ah, taas oo macnaheedu yahay, haddii aad raadineyso wax dheeraad ah oo qotodheer, waa inaad si fiican ula shaqeyso iyaga.
Sidoo kale waxay ku taal Madrid, waxay bixisaa adeegyada naqshadaynta garaafyada gaarka ah, laga bilaabo istaraatijiyad summadeynta ilaa baakadaha, naqshadaynta tifaftirka, hal-abuurka internetka, naqshadaynta interface, hanti-dhawrka summada...
Waxay ku soo jireen qaybtan in ka badan 15 sano waxaan dhihi karnaa waa mid ka mid ah shirkadaha sida dhabta ah diiradda u saaray naqshadeynta garaafka, taas oo ay u dheer tahay sumcadda sare ee loogu talagalay horumarinta webka, sawirada ...
Ha ka cabsan bogga uu leeyahay, ama xaqiiqda ah in muuqaalka aan la arki karin. Mararka qaar, Marka ay wakaaladu haysato shaqo badan, waxay illoobi kartaa in ay hubiso in shabakadeeda la cusboonaysiiyay iyo in aanay bixin khaladaad.
Xaqiiqdu waxay tahay in Strawberry Yogurt ay tahay istuudiyo nashqad garaafyo ah oo ku yaal Valencia kaas oo jebiya xeerarka dhaqanka. Waa casri, hal-abuur, hal-abuur, iwm. Waxa ay doonaysaa in ay gaadho dadwaynaha hadda jooga iyada oo tijaabinaysa waxyaalaha maanta shaqeeya, ma aha wax badan oo caadi ah, laakiin waxa ay raadisaa wax kale oo qarxa.
Maxaad ku takhasustay? Waa hagaag naqshadeynta garaafyada, fiidiyowyada isdhexgalka, joornaalada dhijitaalka ah, apps, bogagga shabakadda iyo muuqaal maqal ah.
Bixi tusaalooyin ku saabsan waxa ay samaysay si ay kula socodsiiso. Dhab ahaantii, 2021 waxay ku guulaysatay abaalmarinta Climent ee qaabka buugaagta ugu fiican.
Haddii waxa aad raadineyso ay tahay hay'ad naqshadeynta garaafyada oo diiradda saareysa calaamadeynta heerka sare, taas oo ah, noocyo aad u adag oo raadinaya joogitaan xooggan, ka dibna ku sharx kan.
Waxay ku taal Madrid waxayna leedahay khibrad 12 sano ah. Macaamiishooda kaliya maahan wax, waxaan ka hadleynaa Yamaha, Behance ...
Marka laga reebo naqshadeynta garaafyada iyo calaamadaynta, waxay sidoo kale bixisaa naqshadeynta shabakadda iyo suuq-geynta internetka, hab lagu furo oo loogu helo adeegyo badan macaamiisheeda.
Xaaladdan oo kale, tani waa hay'ad naqshadeed oo ka soo horjeeda dhammaan kuwii aan aragnay (iyo kuwa aan arki doono). Oo waa taas Waxay diiradda saartay hal nooc oo ka mid ah qaybaha iyo macaamiisha: NGO-yada, aasaaska bini'aadantinimada, iyo mashaariicda bulshada.
Ma aha in iyaga oo kaliya ay la shaqeeyaan, laakiin habka shaqada iyo natiijooyinka ay bixiyaan ayaa aad diiradda u saaraya wakhtigaas bulshooyinka iyo ururada. Sida kuwa kale, ma aha oo kaliya inay bixiyaan naqshad garaafyo, laakiin sidoo kale suuqgeyn.
Baud waa mid ka mid ah hay'adaha suuq-geynta dhijitaalka ah ee qaranka iyo kuwa caalamiga ah ee ugu caansan, oo diiradda saaraya gaar ahaan eCommerce. In kasta oo ay tahay wakaaladda suuqgeynta dhijitaalka ah, waxay leedahay qayb naqshadeynta garaafyada taas oo ay u taagan tahay, maadaama ay khabiir ku yihiin summadaha iyo adeegyada kale ee naqshadeynta.
'Bahalka madow' haddaynu turjunno magaca wakaaladdan. Run ahaantii ma aha wakaalad naqshadayn garaafyo gaar ah, laakiin waxa ay bixisaa adeegyo suuq-geyneed oo khadka ah kuwaas oo takhasuskan laga helay.
Maxaa ka dhigaya mid wanaagsan? Waa hagaag in qiimayaashu aad uma qaali, sababtoo ah waxay isku dayaan inay ku habboonaadaan mashruuc kasta intii suurtagal ah in ay fuliyaan iyaga oo aan lumin tayada ama aan u fiirsan shaqada ay hayaan.
Waxay ku taal Madrid, sida wakaaladaha badankooda.
Xaaladdan oo kale, waxaan aadnaa Cuenca, halkaas oo aan ku leenahay Alquimia, mid ka mid ah naqshadeynta garaafyada iyo wakaaladaha xayeysiiska ee ka muuqda kuwa ugu badan, ma aha oo kaliya meeshaas, laakiin dhammaan Spain.
Waxa ugu badan ee lagu garto shirkadu waa taas Waxay raadiyaan fududaan waxay samaynayaan, maadaama ay ku sharxayaan "minimalism" si ay u fududaato in la xasuusto astaanta, fariinta, iwm.
Ninja ee indhahaaga
Ma waxaad rabtaa wakaalad taaso ah casri ah, hal-abuur leh oo isku daraysa naqshadaynta muuqaallada iyo dhacdooyinka? Waa hagaag, tani waxay noqon kartaa doorasho wanaagsan oo la doorto. Aad iyo aad iyo aad bay u soo kabsanaysaa wayna tusaysaa.
Waxay ku taal Madrid waxayna ka kooban tahay koox ka soo shaqeysay hay'ado kala duwan oo hadda ku biiray.
Waxaa jira wakaalado badan oo sumcad ku leh Isbaanishka. Midna ma u shaqeysay? Ma haysaa kuwa kale oo tixraac ah? Ku dhaaf faallooyinka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Wakaaladaha naqshadeynta ee ugu sumcadda badan Spain
Sida loo gooyo GIF